जनस्वास्थ्य | NayaBishwo.com
बागलुङमा १ सय ४ नयाँ क्षयरोगी फेला
बागलुङ । बागलुङमा क्षयरोगका राेगीको संख्या बढ्दै गएको जानकारी हुन अाएकाे छ । स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले दिएको जानकारी अनुसार यस बर्षको फागुन मसान्तसम्म १ सय ४ जना नयाँ क्षयरोग फेला परेको जनाइएकाे छ । कार्यालयको तथ्याङक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा तुलनात्मक रूपमा नयाँ बिरामीको संख्याँ बढेको हो । जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढि १२ जनामा नयाँ क्षयरोगी भेटीएका छन् ।स्वास्थ्य कार्यालय बागललुङका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक दिपक प्रसाद तिवारीले जिल्लामा क्षयरोगका विरामी उपचारमा गत वर्षको तुलनामा बृद्धि जानकारी दिए । गत… पुरा पढौ
क्षयरोगीको मृत्यु न्युनीकरण गर्न मन्त्री यादवको आग्रह
सन्ताेष श्रेष्ठ काठमाडौं । विश्व क्षयरोग दिवसको अवसर पारेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले क्षयरोग नेपालमा मृत्युका कारक रोग मध्ये सातौं नम्बरमा पर्ने गरेको जानकारी गराउदैं उक्त रोगबाट मृत्यु हुने संख्यामा न्युनीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा प्रतिदिन १८ जना क्षयरोगका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । मन्त्री यादवले क्षयरोगीलाई समाजिक विभेद गर्न नहुने बताए । यो रोग उपचार पश्चात निको हुने भएकोले रोगीलाई अन्य रोगी सरह व्यवहार गरेर उनीहरुको आत्मबललाई उच्च राख्न सकिने उनको भनाई थियो ।… पुरा पढौ
सुत्केरीको मृत्युपछि प्रशासनले गर्यो ५ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचारको क्रममा सुत्केरीको मृत्यु भएपछि अस्पताल तानवग्रस्त बन्यो । अस्पताका डाक्टरको लाप्रबाहीका कारण सुत्केरीको मृत्यु भएको भन्दै आफ्नतले प्रदर्शन गरेका थिए । सुत्केरी व्यथा लागेर अस्पतालमा भर्ना भएकी धनगढी जुगेडाकी २२ वर्षिया रेखा थापाको मृत्युपछि मृतकका आफन्त र अस्पताल प्रशासनबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। थापालाई ४ गते अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। सामन्य रुपमा बच्चा जन्माउन नसकेपछि उनको शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रियापछि बच्चाको अवस्था सामान्य छ। तर, थापाको अवस्था भने गम्भिर बन्दै गएको थियो। उनको… पुरा पढौ
पोखरामा वर्डफ्लू देखिएपछि पर्वतमा सतर्कता
पर्वत । पोखरामा वर्डफ्लू देखिएपछि धौलागिरीमा सतर्कता अपनाइएको छ । धौलागिरी प्रबेश गर्ने नाका डिमुवाबजारबाट कुखुरा र पन्छीजन्य बस्तुहरु आयतमा रोकलगाइएको कुश्मा नगरपालिकाका पशु चिकित्सक रामजी प्रसाद पौडेलले जानकारी बताए । कास्की, चितवन,मकवानपुर लगायतका जिल्लामा कुखुरामा बर्डफ्लू भेटिएपछि यस क्षेत्रमा रोग फैलन नदिन आयतमा रोक लगाइएको पशु चिकित्सक पौडेलको भनाई छ । डिमुवाबाट बुधबार मात्रै चितवन र पोखराबाट कुखुरा बोकेर आएका दुई वटा गाडी सम्बन्धित क्षेत्रमा फिर्ता पठाइएको छ ।कुस्मा र म्याग्दी तथा जोमसोम तर्फ बिक्रीका लागि लगिदै गरेका कुखुरा… पुरा पढौ
"यदि तपाईँ लामो र स्वस्थ जीवन चाहनुहुन्छ भने मीठो निद्रामा समय खर्च गर्नुहोस्," निन्द्रा विशेषज्ञ म्याथ्यु वाकर भन्छन्।युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलीका मनोविज्ञान प्राध्यापक वाकरले थुप्रै अध्ययनमा सहभागी भएका लाखौँ मनिसको तथ्याङ्क अध्ययन गरेका छन्। "निद्रा सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक र निःशुल्क उपलब्ध सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हो," उनी भन्छन्।पचास वर्षको अध्ययन एवम् अनुसन्धानपछि अबको विषय 'निद्राले हामीलाई के गर्छ' भन्ने होइन कि 'निद्राले फाइदा नगर्ने केही छ कि' भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ। निद्राले हामीलाई के गर्छ? तस्वीर कपीराइटGETTY IMAGESImage captionनिद्रा नपुगेमा हाम्रो… पुरा पढौ
काठमाडौं । होली पर्व रंगै रंगको पर्वको रुपले मनाउने गरिन्छ । कोही साथी सँग कोही आफ्न्तसँग होली खेलेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ । तर होलीमा लगाइने विभिन्न किसिम का रंगहरुको समस्यामा पनि उत्तिकै रहेको छ । होली खेल्दा हर्बल मिश्रित कलरको प्रयोग गरिएको छ भने छालामा बढी इफेक्ट गर्छ । तयसैले होली नजिकिदै गर्दा होलीमा प्रयोग भएका रंगहरुको इफेक्टबाट कसरी बच्ने भन्ने बारे जान्नुपर्छ । –अनावश्यक कलरले छालामा विभिन्न समस्याहरु आउने भएकाले होली खेल्न निस्कनुभन्दा अगाड पुरु शरिरमा कपडा लगाएर… पुरा पढौ
काठमाडौंमा बर्डफ्लुः उच्च सतर्कता
काठमाडाैं । काठमाडौंका केही कुखुरा फार्ममा बर्डफ्लुको सङक्रमण देखापरेपछि उच्च सतर्कता अपनाइने भएको छ । बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणसम्बन्धमा बसेको नगरस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बर्डफ्लुबाट कुखुरा मर्ने क्रम जारी रहेसँगै आसपास क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको नगर पशु स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. जयप्रकाशराय यादवले बताउनुभयो । उनका अनुसार तारकेश्वर –७ फुटुङको प्रभावित स्थानका तीन किमी क्षेत्रभित्र रहेका प्रत्येक फार्मको कुखुराको लक्षण जाँच गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी चल्ला, अण्डा, दानालगायत वस्तुमा केही दिन रोक लगाइने प्रमुख यादवले बताए । त्यस्तै… पुरा पढौ
बागलुङवासीलाइ चिकित्सक आएपछि उपचारमा राहत
बागलुङ । कुनै समय एक जना डाक्टरको भरमा चलेको धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङले अहिले विशेषज्ञ सहितको सेवा प्रदान गर्न थालेको छ । साविक धौलागिरि अञ्चलकै एक मात्र सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पछिल्लो समय विशेषज्ञ डाक्टरहरु आएपछि विरामीलाई उपचारमा सहज भएको छ । लामो समयदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको अभावले उपचारमा समस्या भाेग्दैं आएका बागलुङबासीले अस्पतालमा पछिल्लो समय विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको सेवा उपलव्ध पाएका छन् । हाल अस्पतालमा आधा दर्जन बढी विशेषज्ञ डाक्टर सहित मेडिकल डाक्टरहरुले सेवा शुचारू छ। अस्पतालमा सेवा लिने विरामीकाे समेत भीड… पुरा पढौ
काठमाडौं । नियमित रुपमा अण्डाको सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । अण्डामा धेरै खालका पोषकतत्वहरु पाइन्छ । यसमा भिटामिन, मिनरल्स तथा उच्च गुणस्तरको प्रोटिन हुन्छ । तर पछिल्लो एक अध्ययनमा अत्यधिक अण्डा सेवनले मानिसको मुटुमा असर गर्ने देखाएको छ । अमेरिकको नर्थवयस्र्टन युनिर्भसिटीका भिक्टर जोङ्ग नेतृत्वको टोलीले गरेको अनुसन्धानमा यस्तो देखाएको हो । अत्याधिक अण्डा सेवन गर्नाले मुटु रोगको जोखिम बढ्ने र मानिसको अकालमै ज्यान जाने देखाएको हो ।अध्ययनले हप्तामा ३ देखि ४ वटा अण्डा सेवन गर्नेहरुको, नगर्ने भन्दा ६… पुरा पढौ
महिनावारीका बेला किन दुख्छ महिलाको स्तन ?
महिनावारीको समयमा केही महिलाको स्तन दुख्ने समस्या हुने गर्दछ । यतिबेला महिलाको स्तनमा गाँठो जस्तो महसुस हुने गर्छ । महिनावारीका बेला यस्तो समस्या देखिनु स्वाभाविक भएको डाक्टरहरु बताउछन् । किन दुख्छ महिनावारी हुँदा स्तन ? महिनावारीपूर्व स्तन सुन्निने र दुखाई हुने समस्यालाई मेडिकल भाषामा साइक्लिकल मेस्टाल्जिया भनिन्छ । यसमा महिनावारीपूर्व स्तनमा पीडा र गाँठोजस्तो महसुस हुन्छ र रक्तश्राव सुरु हुन थालेपछि यो समस्या आफैं समाधान पनि हुन्छ । धेरैजसो महिलाको महिनावारी साधारणतया २८ दिनको अन्तरालमा हुने गर्दछ र एक… पुरा पढौ